Moto X ike, nyocha na uche | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Motorola, Nyocha
Motorola Ọ marala ka esi emegharị onwe ya. Mgbe onye na-emepụta America, mechaa zụta Lenovo, nọ na-eti ya ihe ikpeazụ, ọ dị ka phoenix site na otuto Moto G na akara ọhụrụ Moto X.
Emeputa juru anyi anya site na iwebata ha ọgbọ ọhụrụ Moto X, na-enye ọtụtụ ọdụ dị iche iche. Ugbu a, mgbe ọnwa atọ nke iji, m na-ewetara gị a zuru ezu Moto X Force nyochaa, smartphone na-apụta maka inwe otu n'ime ihe ngebichi na-eguzogide ọgwụ na ahịa.
1 A sober na irè imewe
2 Jiri ahụmịhe nke Moto X Force: ekwentị siri ike
3 Nkà na ụzụ nke Moto X Force: na elu nke njedebe dị elu nke 2015
5 Simple software na ala customization
6 Ihe kariri imezi ndi mmadu
8.1 Osisi foto nke ejiri Moto X Force mee
11 Isi ihe na ihu ọma
12 Ihe megide
A sober na irè imewe
Ihe mbụ ị hụrụ mgbe ị na-ewere Moto X Force bụ na ọ bụ ọnụ siri ike. Site na iji 149.8 x 78 x 9.2 millimita na ịdị arọ nke 169 gram, ekwentị dị mma nke ọma site na Moto Maker ị nwere ike ịhazi ngwụcha nke Moto X Force, ọ bụ ezie na ọrụ a adịghị na Spain. Ngalaba nke bịakwutere anyị nwere a ballistic naịlọn azụ shei.
Ihe a, nke na-eguzo maka oke iguzogide mmetụta ya, nwere a dị mma nke ukwuu, Ke adianade do, ike ya na-enye ezigbo njide n'aka, na-egbochi ekwentị ịpụ. Naanị ma enwere m ike ịchọta bụ oke unyi nke nylon ballistic na-adọta. Site n'oge ruo n'oge ị ga-enye ya ákwà mgbochi mmiri ka uzuzu wee ghara ịgbakọta. Ihe ojoo di obere site na nguzogide mmetụta di ike nke ihe a.
na Moto X Force n'ihu osisi Ha buru ibu karịa nke ụdị ndị ọzọ, ihe nkịtị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche njirimara nke ihuenyo ya. Na okpuru anyi na - achoputa ihe nlere abuo abuo, obu ezie na otu bu ezigbo onye na ekwu okwu gi ebe nke ozo n’ebu igwe okwu.
Ebumnobi bọtịnụ ma gbanyụọ ya, yana njikwa olu, nke dị n'akụkụ aka nri nke Moto X Force, na-enye obi ike zuru oke na mmetụta nke ike mgbe a na-eme ya. Ihe a nile aluminom ahụ na-etinye icing na ekwentị na a sober imewe, àgwà kwuchara na na awade a mmetụta nke nche ekele ya na-eguzogide ọgwụ na ihuenyo.
Jiri ahụmịhe nke Moto X Force: ekwentị siri ike
Ma ọ bụ na ihe kachasị dị ịrịba ama nke Moto X Force na-abịa na ihuenyo ya enweghị ike iwepu. Ma ọ siri ike dịka ha na-ekwu? Eziokwu bu na oburu. Anọ m ọnwa atọ na Moto X Force na m na-ama na-agwa gị na ọ na-eguzogide bumps na-ada na-enweghị ya na ihuenyo na-agbasa.
Agaghị m aghọgbu gị: Fewbọchị mbụ m hapụrụ ekwentị ugboro ole na ole iji hụ ka ọ si akpa àgwà. Ọ gafere na mpempe akwụkwọ. Ozugbo m hụrụ na Moto X Force na-eguzogide ọgwụ na ọdịda, ekpebiri m inye ya ihe okike, na-enweghị ịmanye ọnọdụ ahụ. Ebe ọ bụ na adịtụ m nzuzu, edoro m anya na n'oge na-adịghị anya ekwentị ga-ata ahụhụ ọzọ. Ya mere ọ dị.
N'ime ọnwa atọ a Enwere m mmasị na ekwentị ugboro iri na abụọ. Ihuenyo ahụ guzogidere n'ụzọ zuru oke maka teknụzụ ShatterShield ya. Maka nke a, Moto X Force ihuenyo nwere ihu ise nwere ụdịrị njirimara ndị a:
Layer 1: Mee nke aluminom siri ike, ọ bụ akwa nke agbakwunyere akụkụ ndị ọzọ, na-enye nkwụsi ike na ịdị n'otu na ihuenyo ahụ.
Layer 2: Nke a bụ ebe ihuenyo AMOLED dị, arụpụtara ya n'ụzọ pụrụ iche ka ọ dịrị nro karịa na-enweghị ịda mba.
Layer 3: ọ bụ akwa oyi akwa, onye na-ahụ maka ịnyefe pulsations anyị. Rịba ama na oyi akwa a dị okpukpu abụọ ma ọ bụrụ na otu n’ime ha agbaji n’ihi mmetụta, akwa ọzọ ga-ekwe ka ekwentị ahụ rụọ ọrụ.
Layer 4: mkpuchi nchebe nke nghọta kachasị na nnukwu nguzogide nke na-anaghị agbawa ma ọ bụ mebie n'okpuru mmetụta na ọkpọ. Ọ bụ ọrụ maka igbochi mgbawa ndị ụjọ na-egosi na ihuenyo mgbe ịfụchara.
Layer 5: nke ikpeazụ bụ nke anyị ji eme ihe, nwere njirimara nke yiri nke anọ, ọ bụ ezie na ọ nwekwara nchedo megide abrasion na ndị ọrụ mpụga ndị ọzọ.
Nkọwa zuru oke bụ na, Mgbe ọnwa mbụ ejirila, agbachapụrụ m Moto X Force n'amaghị ama: n’izuụka abụọ adaara m ya karịa oge ọnwa niile gara aga. Nke ahụ na-eme ka amata echiche nchekwa nke ekwentị a na-enye n'ihe banyere iguzogide ọdịda.
N'ezie, akụkụ ụfọdụ aghaghị iru eru. Ihe kachasị mkpa bụ banyere nguzogide nke ọnụ. Ọ bụ eziokwu na ihuenyo nke Moto X Force na-anagide ahụhụ ọ bụla na-enweghị mmebi, Ọdịdị nke ekwentị na-enwe nsogbu ọ bụla ya mere, dị ka ngwaọrụ ọ bụla ọzọ, ahụ nke Moto X Force ga-ata ahụhụ akara site na ndapụta mberede ma ọ bụ bumps.
Ma mgbe ahụ enwere akụkụ ọzọ nke mechuru m ihu, na ọtụtụ: ọ bụ ezie na ihuenyo nke Moto X Force bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ enweghị ike ịgbagha, ọkọ dị nnọọ mfe. Enweghị iji ụdị ọ bụla nke ihe nchebe ihuenyo ma ọ bụ mkpuchi, n'ime ihe na-erughị izu abụọ enweelarị m mbido mbụ na ihuenyo.
Ọ dị mma, ịnwere ike itinye nchebe ihuenyo iji zere ịkachasị ihuenyo ahụ, mana nkọwa a na-ewe iwe. Agbanyeghị, yana a n'echebe nke mere na ihuenyo adịghị ata ahụhụ ọkọ, a ga-eji Moto X Force mee ihe n'ụzọ zuru oke na-enweghị ụdị mkpuchi ọ bụla, ịbụ otu n'ime naanị njedebe dị elu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị naanị ya, nwere ike ị nweta okomoko a. Maka ndị mmadụ na-esichaghị ike, dị ka m, nke ahụ bụ nkọwa zuru ezu iburu n'uche.
Nkà na ụzụ nke Moto X Force: na elu nke njedebe dị elu nke 2015
Akụkụ X x 149.8 78 9.2 mm
Ibu ibu 169 grams
Ihuenyo 5.5-inch na-agbanwe agbanwe AMOLED na mkpebi 2560 x 1440 pixel na 540 dpi nwere teknụzụ Shatterproof
Nhazi Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 isi asatọ (Quad Core Cortex A -57 ruo 1.5 GHz ọsọ na Quad Core Cortex A-57 ruo 2.0 GHz ọsọ)
RAM 3 GB ụdị LPDDR4
Nchekwa n'ime 32 ma ọ bụ 64 GB gbasaa site na MicroSD ruo 256 GB dabere na ụdị a
Igwefoto na-aga n'ihu 230 megapixel Sony IMX 21 sensor na f / 2.0 27 mms / OIS / autofocus / nchọpụta ihu / panorama / HDR / Dual LED flash / Geolocation / 1080p ndekọ vidiyo na 30fps ma ọ bụ vidiyo 2K na 30 fps
Igwefoto ihu 5 MPX na n'ihu Ikanam flash; Vidiyo 1080p
Njikọ DualSIM Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / dual band / Wi-Fi Direct / hotspot / Bluetooth 4.0 / A-GPS / GLONASS / BDS / GSM 850/900/1800/1900; Ndị 3G (HSDPA 850/900/1700/1900/2100 - XT1580) 4G na ndị agha 1 (2100) 2 (1900) 3 (1800) 4 (1700/2100) 5 (850) 7 (2600) 8 (900) 12 (700) 17 (700) 20 (800) 25 (1900) 28 (700) 40 (2300) - XT1580 (Nkeji)
Atụmatụ ndị ọzọ Metal ahụ / ultra eguzogide ọgwụ ihuenyo / ikwommiri eguzogide / ngwa ngwa Nchaji usoro
Batrị 3.760 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Ahịa 690 euro na Amazon
Su Qualcomm Snapdragon 810 processor na ụdị 3 GB nke DDR4 nke ụdị DDR na-eme Moto X Force na elu nke njedebe kachasị elu, mana site na afọ gara aga 2015. Mana ekwesịrị icheta na ekwentị a abịabeghị ihe kachasị njọ, mana bụrụ ihe na-eguzogide ọgwụ kwa ụbọchị. Ihe mgbaru ọsọ ahụ na-emezukwa ya n'ụzọ zuru oke. Ma ọ dịkarịa ala, anyị maara na ọ dịghị mkpa iburu ihe mkpuchi ebe ọ bụ na, ọ bụ ezie Moto X Force ga-ata ahụhụ na akara na ikpe ya, ihuenyo ekwentị agaghị agbaji.
Nakwa njirimara njirimara ndị a otu arụ ọrụ zuru oke, dika aturu anya. Enweela m windo ya site na windo ya, na-egwu egwuregwu ọ bụla, n'agbanyeghị agbanye ike ike ọ chọrọ, na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Otu n'ime nchegbu m bịara na mgbagha mgbe niile Qualcomm Snapdragon 810 processor. Motorola na Qualcomm họọrọ maka nke abụọ nke flagship SoC nke 2015 iji zere nsogbu arụmọrụ dị egwu.
Nsonazụ ahụ? Na AnTuTu the Moto X Force erutela akara 93.000, nnọọ ihe na-akpali ọgụgụ. Nke kachasị mkpa: Anọ m na-egwuri egwu ruo ọtụtụ awa na-enweghị nhụjuanya ọ bụla na ọnọdụ okpomọkụ, yabụ enwere m ike ijide gị na Moto X Force anaghị ata ahụhụ nsogbu ọ bụla.
Na Snapdragon 810, arụmọrụ na-ejedebe dị ka ihe nhazi ahụ ọkụ. Usoro nchekwa a na - egbochi ihe nhazi ahụ ịrị elu karịa ụfọdụ okpomọkụ, na - egbochi ọnụ na - ekpo oke ọkụ.
Oku "Rgba ọsọ nke anụ ahụ" ọ na - egbochi arụmọrụ ekwentị mgbe ọ na - arụ ọrụ buru ibu ruo ogologo oge, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ichegbu onwe anyị banyere nke ahụ, ebe ọ bụ na a na - ahazi ọtụtụ ngwa ka ha nwee otu isi ka usoro ahụ wee ghara nrụgide.
Na egwuregwu, ọ bụ ezie na arụmọrụ nke ihe nrụpụta na-ebelata ntakịrị mgbe ejiri ya ogologo oge, ọ dịbeghị oge m chọpụtara ụdị lag ma ọ bụ dobe na okpokolo agba. Ka anyị cheta na anyị na-ekwu maka ya ọnụ nke nwere otu nhazi kacha mma nke afọ gara aga.
Nkwubi okwu m na nke a dị mfe: n'agbanyeghị ịbụ onye nwere njedebe nwere njirimara ochie ma ọ bụrụ na anyị echeta ọnụahịa mmalite ya, euro 699, Moto X Force na-arụ ọrụ zuru oke, na-enye gị ohere ịnụ ụtọ ngwa ọ bụla, egwuregwu vidiyo ma ọ bụ ọdịnaya ọtụtụ ọdịnaya na-enweghị nsogbu.
Otu ihe dị mkpa dị na ekwentị bụ ogo nke ihuenyo ya. Na ebe ndi otu Motorola achoputara ya site na itinye aka na Moto X Force a gbasaa panel AMOLED Ọ na-enweta mkpebi 2K (pikselụ 1440 x 2560) na 544 dpi. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ọ bụla.
Ekwuola m n'ogologo banyere nguzogide dị elu nke ihuenyo ya, ekele na teknụzụ ShatterShield. Ugbu a, ọ bụ ntụgharị nke ogo onyonyo. Na ebe a, na-enweghị ịdị oke mkpa dịka na ngwaọrụ ndị ọzọ na-ejikọ ogwe AMOLED, Ihe ngosi P-OLED nke Moto XD Force naputara.
na agba dị ka ihe doro anya na magburu onwe nkọ na-ekiri akụkụ. Nhazi dị n'etiti ọdịiche na nchapụta ziri ezi, na-enye ohere ka ịgụ akwụkwọ na-enweghị nsogbu na ihuenyo ahụ n'èzí n'ìhè. Site na itinye nchapụta opekata mpe, ị gaghị enwe nsogbu ị na-agụ n'ọchịchịrị zuru oke na-enweghị nsogbu site na nchapụta ihuenyo.
Enwere m nchegbu banyere ngalaba aka ebe ọ bụ na njikọta kọntaktị ejikọtaghị na P-OLED panel dịka ọ na-eme na ekwentị ndị na-eji ogwe AMOLED na-agbanwe agbanwe. O sina dị, nzaghachi ihe zuru oke, Enwebeghị ụdị oge ọ bụla iji Moto X Force n'ime ọnwa atọ a.
Ọ dakwabeghị m mana achọrọ m ịkọwa nke ahụ, na ọdịda ụfọdụ, akwa oyi akwa mbụ nwere ike ịdọ adọ, ọbụlagodi na ọ naghị agbaji. Mgbe ahụ Motorola na-enye ikike nke afọ anọ na-ekpuchi mmebi nke mbụ na nke abụọ nke ihuenyo Moto X Force.
Simple software na ala customization
Otu n'ime ihe Motorola mụtara mgbe ọ gafere Google bụ mkpa ọ dị ịnye ọnụ na a nhazi ala. N'ụzọ dị otú a, onye nrụpụta na-ekwe nkwa mmelite agile dị ntakịrị karịa ndị ọzọ.
Mụ onwe m nwere ekele maka nke ahụ ole na ole ngwa na ịba uru na-abata na mbụ, dị ka ihe ngosi zuru ezu. Na mgbakwunye, Motorola etinyela obere ọrụ dị ka ịgbanye ekwentị ugboro abụọ iji mepee igwefoto ma ọ bụ ịkwanye ya iji mee ka flash ahụ m hụrụ bara ezigbo uru ma na-atọ ụtọ.
Nkọwa ọzọ m hụrụ n'anya bụ usoro ngosi ya "Ngosipụta Ngosipụta" nke anyị nwere ike ịhụ onye na-edegara anyị akwụkwọ site na AMOLED ihuenyo ebe ọ bụ na ọ na-agbanye naanị oghere ndị ahụ. N'ụzọ dị otú a, anyị nwere ike ịhụ ihe ruru ekwentị n'ebughị ụzọ kpọghee ya.
Enweghị m ike ichefu ihe mmetụta sensọ ya dị nso na-achọpụta mgbe enwere ụfọdụ ije dị nso ma mee ka oge na ọkwa dị na ihuenyo. Na mbụ ọ dị m ka ọ dị iche, ebe ọ bụ na obere ijegharị na-eme ka ihuenyo ahụ rụọ ọrụ, mana mgbe obere oge gasịrị ọ dị ka nhọrọ bara uru ma na-atọ ụtọ.
Ihe a niile n'okpuru Gam akporo 6.0 MarshMallow, Na-agba ọsọ na ahụmịhe ọhụụ nke Google Ugbu a Launcher. N'ụzọ dị otú a, anyị na-ahụ igbe dị ngwa nke ngwa ngwa yana kensinammuo iji.
Ihe kariri imezi ndi mmadu
Anya isi na Moto X Force nwere a 3.760 mAh batrị, a ga-atụ anya na nnwere onwe ya dị ịrịba ama. Ma ọ bụ, ọ bụ ezie na ya nuances. Echere m na ekwentị ahụ emeela nke ọma, na-eru otu ụbọchị na ọkara nke nnwere onwe ma ọ bụrụ na m nyere ya ahụ iru ala, mana ịnwụ n'abalị n'ụbọchị kpụ ọkụ n'ọnụ.
Awụnyela m ngwa niile achọrọ m, hazie netwọkụ mmekọrịta na ọrụ izi ozi na enyela m ya okpete nke ga-enye ekwentị nke m yana nnwere onwe m tụrụ anya karịa na ogo Huawei Nwunye 8.
Otu ụbọchị kpụ ọkụ n'ọnụ, na-aza ọkwa, ozi ịntanetị, sọọfụ ịntanetị, na-ege egwu ma na-egwu egwuregwu, n'abalị Moto X Force bịakwutere m karịa nke ọma, na 15-20% percent.
Amaara m na ọ bụ ezigbo ọnụọgụ ma e jiri ya tụnyere ekwentị ndị ọzọ, mana ọ na-ahapụ m uto dị ụtọ. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ha ejiri ezigbo IPS panel nwere mkpebi 1080p ọ ga-abụrịrị ihe zuru oke, na-emekwa ka nnwere onwe nke Moto X Force dịkwuo mma, ịdị mma karịa nkezi, ọ dị ka ọ dịtụ mma ịtụle 3.760 mAh ya.
N'ezie, anyị ga-mata ya Ike n'Aka ngwa ngwa Nchaji usoro, Motorola nwere nke na-enye ohere Moto X Force iji weghachite ezigbo ụgwọ ụgwọ na nkeji ole na ole. Emeela m ọtụtụ ule na ọkara elekere enwere m ọkara ekwentị ebubo na n'ime elekere ọ bụ 100%.
El ọkà okwu abụghị isi okwu siri ike nke Moto X Force. Otu ọkà okwu ya, nke dị na nkenke ziri ezi, na-enye ụda doro anya doro anya, ọ bụ ezie na enweghị treble na bass.
Igweisi na-abịa na Moto X Force bụ ndị soro Moto X akara kemgbe ọ malitere. Fọdụ mma ekweisi Ha na-enye ezigbo mma dị mma, na-enweghị oke ọfụma, agbanyeghị na ezughi oke maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Mee ka nke ahụ pụta ìhè olu na ogo oku di nma, ihe ezi uche dị na ya ma ọ bụrụ na anyị atụle na Moto X Force nwere igwe okwu ise na-arụ ọrụ.
Moto X Force nwere otu nke kasị mma ese foto na ahịa. Dị mfe dị ka nke ahụ. Anya gị Sony IMX 230 Site na ihe mmetụta 21 megapixel nke na-enye oghere f / 2.0 na 1 / 2.4 sentimita asatọ, ọ na-enye ohere ka e lekwasị anya nke ọma na mgbakwunye na iweghara ihe dị mma na gburugburu ọkụ adịghị mma.
Na nke a, anyị ga-agbakwunye ya na mmelite ya na gam akporo 6.0 Marshmallow anyị nwere ike mezie ikpughe n'ụzọ dị mfe, imeziwanye ohere nke igwefoto na-enweghị ụba mgbagwoju anya nke iji ya.
Ma obu na na-elekwasị anya na ikpughe ihe mgbochi Ọ ga-ekwe ka anyị wepụta onye na-ese foto anyị na-ebu n'ime na-enweghị ọtụtụ mgbagwoju anya. N'ezie, sọftụwia igwefoto dị mfe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịme ihe kachasị nke igwefoto, ị ga-achọ azịza ka mma na ngwa ngwa Google. Anyị enweghị ike ichefu ụda ọkụ ya abụọ nke na-enyere aka melite onyonyo ndị enwetara.
La Igwefoto n'ihu bụ 5 megapixels ma nwekwa ọkụ ọkụ nke ahụ ga - enyere gị aka ịse foto dị mma na gburugburu ọkụ. Ezigbo nkwado maka ndị hụrụ foto onwe ha n'anya.
Osisi foto nke ejiri Moto X Force mee
Ahụmahụ m na Moto X Force dị ezigbo mma. Ngwaọrụ nwere akụrụngwa iji dakọtara yana nnukwu nguzogide nke jisiri iji ekwentị ọzọ na-enweghị mkpuchi ọ bụla.
N'oge a, ekwentị ọ bụla dị elu chọrọ ikpe ma ọ bụrụ na ị kpachaghị anya. Ma n’agbanyeghi ya ị nwere ike ịnwe ihe mberede. Na Moto X Force nchegbu a na-efesa mgbe ụbọchị ole na ole jiri. Ọ dịka ịnwe Nokia 3310 nwere ezigbo atụmatụ.
Na eziokwu nke ịnwe ihe nchebe ihuenyo iji gbochie ihuenyo ahụ site na ịpịpụta dị ka obere ihe ọjọọ na-eche na ogwe gị agaghị ata ahụhụ ọ bụla site na ọtụtụ ọdịda ọ na-ata ahụhụ, ọ dị m ka ọ bụ ihe na-echebara echiche.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ekwentị na-eguzogide ọgwụ nke nwere njirimara njedebe dị elu, egbula oge, Moto X Force bụ nhọrọ kachasị mma ịtụle.
Ihuenyo gị na-anagide ọdịda na bump na-enweghị imebi
Ezigbo obodo kwụụrụ onwe ya yana sistemụ na - eweta ọsịsọ nke ọma
Igwefoto Moto X Force na-enye ọmarịcha njide
Ihuenyo ahụ na-ese dị ka ekwentị ọ bụla
Motorola Moto X Force enweghị FM Radio
Ọnụahịa ahụ dịtụ ntakịrị, ọ bụ ezie na a ghaghị iburu nguzogide ya na akaụntụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Motorola » Moto X Force, nyocha na echiche mgbe ị jiri ya ọnwa atọ
Azụrụ m akụrụngwa m na Jenụwarị ma na mbido Mee ka ọ malitere ịda, ọ maghị chaja turbo ma batrị ebilighị na 4%, na ST ha enweghị ike ịmata nsogbu ahụ ma ha ga-enye m a ohuru
Zaghachi Esteban Donoso
Giovanni Oliden (@_ozie_onyeka) dijo
Ezi ndetu, naanị otu okwu. A na-akọ oyi akwa ị na-enweta na kọntaktị, mana ọ dị ka mica ma nwee ike dochie ya. Daalụ
Zaghachi Giovanni Oliden (@giovanni_oliden)
Enwere m Moto X Force kemgbe Jenụwarị, naanị nsogbu m nwere bụ na ọ weghachitere ugboro ole na ole. X na-egwu egwu, dị ka nke a na ha nwere ike ịtụle ya. Na n'ikpeazụ, olee mgbe a ga-ahapụ kaadị 2 Terabyte SD? Ihe nlereanya m nwere bụ 64G n'ime ebe nchekwa. Daalụ. Daalụ. ATTE Ernesto R. Ronzón
Regain furu efu ebe nchekwa na PvP-a arọ Action-RPG akpọ ngwakọta nsogbu